AmaBrandionion: Ukuqashwa Kwedumela, Ukuhlaziywa Kwezinzwa, kanye Nezexwayiso Zokusesha Nezokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
Ngenkathi amapulatifomu amaningi wezobuchwepheshe bokumaketha ukuqapha idumela nokuhlaziywa kwemizwa kugxile kuphela kwimithombo yezokuxhumana, Izimpawu ngumthombo ophelele wokuqapha noma yikuphi noma konke okushiwo ngomkhiqizo wakho ku-inthanethi.
Noma iyiphi impahla yedijithali exhunywe kusayithi lakho noma okukhulunywe ngayo ngomkhiqizo wakho, umkhiqizo, i-hashtag, noma igama lesisebenzi… ihlolwe futhi ilandelwe. Futhi ipulatifomu yeBrandmentions inikeza izexwayiso, ukulandelela, nokuhlaziywa kwemizwa. Izimpawu inika amandla amabhizinisi:
Yakha Ubudlelwano Ozibandakanya - Thola futhi uzibandakanye namakhasimende akho kanye nabathonya abalulekile ku-niche yakho okuzokunika ukuvezwa komkhiqizo okukhudlwana nokuqonda okuhle ngemakethe yakho oqonde kuyo.
Zuza futhi ugcine amakhasimende - Yazi izintshisekelo zamakhasimende akho futhi wakhe imikhiqizo ezohlangabezana nezidingo kanye nezifiso zabo ngqo. IBrandMentions ikutshela ukuthi ungayikhangisa kuphi imikhiqizo yakho futhi uthole amakhasimende amasha.
Phatha igama lomkhiqizo - Ngokuhlala wazi ukuthi ngubani okhuluma ngawe nokuthi yini, uthola amandla okuqonda nokuvikela isithunzi sakho emakethe yokuncintisana okukhulu.
IBrandMentions isiphenduke ithuluzi elibalulekile lokulinganisa impumelelo yemikhankaso yethu yokumaketha. Sisebenza kanzima ukwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo wethu ku-inthanethi, futhi alikho elinye ithuluzi esilivivinyile elithola ukushiwo okuningi okufanele njengeBrandMentions. Sincoma kakhulu!
UMark Traphagen, uMqondisi oMkhulu weBrand Evangelism eThempelini laseMatshe
Kanye namawebhusayithi, Izimpawu Abaqaphi futhi bathathe okushiwo yimithombo yezokuxhumana ku-LinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, naku-Youtube.
Izici ze-Brandmentions Zibandakanya:
Ukuqapha iwebhu kanye nomphakathi - Gada konke okushiwoyo mayelana nenkampani yakho noma umkhiqizo kuzo zonke iziteshi ezibalulekile, kungaba yiwebhu noma imithombo yezokuxhumana. Ukubizwa kweBrand kukugcina usesikhathini nakho konke okubalulekile emakethe yakho nanoma yini exhunywe enkampanini yakho, ikunikeza izexwayiso zesikhathi sangempela ngqo ebhokisini lakho lokungenayo.
Ukuhlola Ukuncintisana - Ukuhlaziya amasu esincintisana nabo akuyona inketho nje. Kuyingxenye edingekayo yecebo lakho lokukhula. Lapho ungathola okwengeziwe ngebhizinisi lakho nabancintisana nabo, kulapho ungafunda khona, uzivumelanise, futhi ekugcineni uchume. Manje usungahlola izimbangi ezivela ezinhlangothini ezahlukene futhi ube nombono ocacile wokuthi umncintiswano umi kuphi empeleni.
Izaziso Zesikhathi Sangempela - Thola ukuthi ngubani okhulume ngawe nokuthi kuphi lapho benza khona. IBrandMentions ikunikeza izaziso zesikhathi sangempela njalo uma uthola ukukhuluma okusha noma izixhumanisi. Manje usunokufinyelela okusheshayo kuyo yonke idatha ebucayi ehlobene nomkhiqizo wakho kuwebhu nakunethiwekhi yokuxhumana nomphakathi.
I-Akhawunti Yami Yokwengeza
Bengilokhu besebenzisa Izimpawu izinyanga ezimbalwa manje futhi bekumnandi. Amandla wokuqapha yonke into kungxenyekazi eyodwa awusizo olukhulu. Kuthathe imizuzu embalwa nje ukusetha i-akhawunti futhi wengeza ezinye izihloko (kanye nesayithi lami) ukuzolalela.
Ukutholwa kwe-imeyili okuphelele kwansuku zonke yilokho engikudinga ukukubuyekeza futhi ngiphendule kunoma ikuphi okushiwo isiza sami ngegama noma nge-URL:
Kusukela iqala ukusebenzisa Izimpawu, Ngiye:
Ngikhombe enye incwadi ebentshontsha okuqukethwe kwami. Bakhiphe okuqukethwe futhi abasakushicileli kabusha.
Ikhombe ukumaketha okuthile abathonya abekade babelana ngokuqukethwe ebengingakulandeli noma ngibonise ukubonga kwami.
Ngikhombe amanye amawebhusayithi ezinye izipikha okwaxoxwa nawo noma abhala kuwo - okunika ithuba lokuthi ngithole ukuvezwa okwengeziwe.
Angikhathali ngokuhlaziywa kwemizwa kwazise ukushicilelwa kwami ​​akubhali insizakalo noma yini ephikisanayo. Kodwa-ke, uma uthengisa umkhiqizo noma insizakalo, ukuqonda ukuthi imizwa mayelana nomkhiqizo wakho inhle noma iyimbi kubaluleke kakhulu empumelelweni yakho yonke yebhizinisi.
Qalisa Isilingo Samagama Esamahhala
Tags: ukuqapha i-backlinkukuqapha umkhiqizoukufakwa kwezimpawuukuqapha ukuncintisanaukuhlakanipha kokuncintisanaFacebookUkuqapha kwe-Facebookezineukuqapha okunezinhlangothi ezineukuqapha i-hashtagukuqapha igama elingukhiyeLinkedInukuqapha i-linkedinyisho izexwayisoPinterestukuqapha i-pinterestRedditukuqapha i-redditukuphathwa kwedumelaukuqapha isithunziimizwaukuhlaziywa kwemizwasocial mediaizexwayiso zokuxhumana nabantuukuqapha ezokuxhumTwitterUkuqapha kwe-twitteryoutubeUkuqapha kwe-YouTube